जीवराज आश्रितजीको निधनपछि चुनाव नलड्नु मेरो गल्ती रहेछ : माया ज्ञवाली न्यौपाने [भिडियोसहित] – SawalNepal
जीवराज आश्रितजीको निधनपछि चुनाव नलड्नु मेरो गल्ती रहेछ : माया ज्ञवाली न्यौपाने [भिडियोसहित]
By सवालनेपाल	 प्रकाशित समय २०७४, १ फाल्गुन मंगलवार २१:००
तपाईंको राजनीतिक बुझाइ र प्रतिक्रियाहरुप्रति आम मानिसलाई जानकारी छैन। पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनप्रति तपाईंको बुझाइ बताइदिनुस् न!
अहिलेको राजनीति भनेको जनआन्दोलन र संविधान निर्माणपछिको राजनीति हो। यदि राजा प्रजातान्त्रिक र संघीयतामा जान मिल्ने खालका पनि हुन्थे भने राजासहितको परिवर्तन हुन्थ्यो होला। तर, राजाले निरंकुशतातिर लैजान खोजेको हुनाले ०६३ को आन्दोलन सुरु भयो। गणतन्त्र ल्याउनैपर्ने बाध्यता भयो। समयअघि नै गणतन्त्र आउने परिस्थिति बन्यो। राजा वीरेन्द्रको हत्या नभएको भए गणतन्त्र आउने थिएन। संघीयतामा जाने मौका पनि पाउने थिएनौं। यसलाई दुर्भाग्यले ल्याएको सौभाग्य भन्छु।
तपाईंमा राजनीतिक विचारहरु विकास हुनुका पछाडि कस्तो वातावरण थियो?
म कम्युनिस्ट परिवारमा जन्मेको हुँ। मेरो घरमै सेल्टर हुन्थ्यो। हाम्रोमा केशरमणिदेखि थुप्रै साथीहरु भूमिगत रुपमा जाने-आउने हुन्थ्यो। पुलिसहरु आउँथे। बाहिर भन्नुहुन्न भनेर हामी केटाकेटीलाई खबरदारी हुन्थ्यो। हामी घन्टीको रस्सी समाएर तल बस्थ्यौं। पुलिस आयो भने घन्टी बजाउनु भन्थे। घरमा मार्क्स, एंगेल्स र माओका फोटोहरु लाइन लगाएर राखिएका थिए। हाम्रो घरमा ‘चीन सचित्र’, बेइजिङ र कोरियन कम्युनिस्ट किताबहरु आउँथे। हामी हेर्थ्यौं। बुबाको औपचारिक अध्ययन सामान्य भए पनि भौतिकवादी दर्शन र चिन्तनका किताबहरु पढ्नुहुन्थ्यो। महात्मा गान्थीका किताबहरु पनि पढ्नुहुन्थ्यो। यसै क्रममा ममा पनि सानैदेखि कम्युनिस्ट चरित्र विकसित हुँदै आयो।
पछि शिक्षण गर्न थालेँ। गाउँमा ०३३ सालदेखि ०४६ सालसम्म करिब १७ वर्ष पढाएँ। कसरी क्रान्तिकारी महिला बने भन्ने कुरा पढेँ। ‘नारी : बन्धन र मुक्ति’ जस्ता किताबबाट प्रभावित भएँ। त्यस्तै, पद्मरत्न (तुलाधर) कमरेडको काठमाडौंमा बोलेको भाषणको क्यासेट सुनेको थिएँ। त्यसबाट पनि प्रभावित भएँ। त्यतिबेला पार्टीको निम्ति घर छाडेर हिँड्नुपर्छ, पार्टीलाई जुन उपायबाट पनि सहयोग गर्नुपर्छ भनेर लागेँ। तर, मैले कम्युनिस्ट दर्शन नै त्यति धेरै पढेको भने होइन।
तपाईंको राजनीतिक आबद्धता चाहिँ कसरी भयो?
जीवराज कमरेडको निधन अगाडि तपाईंहरुबीच राजनीतिक छलफल, विचार-विमर्श कत्तिको हुन्थ्यो?
पटक्कै हुँदैनथ्यो। त्यो मौका नै कसरी मिल्थ्यो र? उहाँ भूमिगत भएर पार्टीको काम गर्नुहुन्थ्यो। दुई/तीन महिनामा एकपटक आउनुहुन्थ्यो। कहिले चिठी पठाउनुहुन्थ्यो। हाम्रो राजनीतिक सल्लाह भनेको बिल्कुलै बन्द भने थिएन, केही चर्चा त हुन्थ्यो। तर, समय नै कहाँ पाउनु र? बत्तीमुनिको अँध्यारो हामी त! उहाँले परिवारमा ध्यान दिन सकेको भए, शिक्षामा जोड दिन सकेको भए, राजनीतिमा माथि पुर्या उन कोसिस गरेको भए धेरै माथि गइन्थ्यो। त्यस्तो मौका उहाँलाई भएन। उहाँ मुलुक बनाउन, पार्टी बनाउन लाग्नुभयो। उहाँलाई पटक्कै समय भएन। खाना खाने समेत फुर्सद हुँदैनथ्यो।
दुर्घटनामा उहाँको निधन भएको त्यतिबेला कसरी थापा पाउनुभयो?
कमरेडको मृत्युपछि तपाईं सार्वजनिक रुपमा बाहिर त्यति देखिनु/सुनिनुभएन। पछिल्लो पुस्ताका धेरैलाई त तपाईंबारे थाहै छैन। दिनहरु कसरी बितिरहेका थिए?
लामो समयसम्म तपाईं कुनै राजनीतिक पदमा देखिनुभएन। किन?
तर, अब सांसदको जिम्मेवारी पाउँदै हुनुहुन्छ। कस्तो लाग्दै छ?
केके बोलौंला भन्ने लागेको छ, तपाईंलाई?
कहिल्यै भाषण गर्नुभएको छ?
तपाईंलाई यस पटक सांसद बन्नुपर्छ भनेर कसले प्रस्ताव गर्‍यो?
तपाईंलाई समानुपातिकमा तपाईंको नाम राख्दै छौं भनेर कसले जानकारी दियो?
सरले छाडेर जानुभएको एमाले र अहिलेको एमालेमा तपाईं कत्तिको फरक देख्नहुन्छ?
तर अहिले वैचारिक रुपमा पार्टी कमजोर भएको, व्यक्तिगत स्वार्थमा नेताहरु अल्झेको देखिन्छ नि, होइन र?
पहिले भूमिगत हुँदा पेसेवर साथीलाई निश्चित रकम दिएर उहाँहरुलाई खाने, बाँच्नेको व्यवस्था हुन्थ्यो। अहिले सबै खुला हुनुभयो। अहिले सबैको परिवार भए, साना छोराछोरी ठूला भए। घर नहुनेको पनि घर भयो। समय र परिस्थितिअनुकूल हुन खोज्दा यस्तो भएको होला। तर पनि अभाव भएका र केही नहुनेहरुको क्याटागोरी छुट्याउनुपर्ने हो, त्यस्तो भएको छैन। गैरी खेत र पाखो खेतलाई एउटै पानीले हुँदैन। सबैलाई समान रुपले सिँचाइ गरेमा मात्रै खेती हुन्छ। बहुदल आउनेबित्तिकै ती कुरा छुटे। हामी राजनीतिक आन्दोलनमा लाग्यौं। कार्यकर्तालाई ट्र्याकमा राखिरहने खालको अनुशासन भएन।
धेरै मानिसको कुरा सुनिन्छ, एउटै दुर्घटनामा बित्नुभएको मदन कमरेड र जीवराज आश्रितको परिवारमा धेरै असमानता छ। मदनजीको श्रीमतीले पटकपटक अवसर पाउनुभयो। अहिले राष्ट्रपति पनि हुनुभयो। तर, तपाईं चाहिँ गुमनाम हुनुभयो। यस्तो किन भयो?
अहिले एमाले र माओवादीबीचको पार्टी एकता अन्तिम चरणमा पुगेको छ, कसरी हेरिरहनुभएको छ?
नेपाल लाइभ बाट साभार
फोहर जलाउँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल १५ मिनेट बन्द!